ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ နှစ် - ဗီဒီယိုက ချက်တင် ကမ္ဘာကြီး
မေးခွန်းမေးမြန်းစစ်ဘက်ရှေ့နေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ယက်များဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများတစ်ဦးအဖြစ်၎င်းဒေသများ၏လှုပ်ရှားမှုကိုရွေးချယ်စစ်ရေးအကြံဉာဏ်။ မေးခွန်းများတွင်စစ်ဘက်ရေးရာအတော်လေးရှုပ်ထွေးပွေလီ၊အများကြီးပိုရှုပ်ထွေးထက်ပြည်တွင်းဥပဒေ။ ထို့ကြောင့်သူတို့နားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်များအတွက်စစ်ဘက်ရှေ့နေများရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေသောလူအပေါင်းတို့သည်ရုပ္ရွင္ႏတပ္မေ။ တစ်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသင်အမြဲအကူအညီရနိုင်၏အစိုးရရှေ့နေမည်သူနားထောင်ဖို့အသင့်ပြဿနာကိုသင်ပြောပြဘယ်လောက်အကောင်းဆုံးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အထူးသဖြင့်အမှု၌။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတစ်ဦးအလွန်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအခြေအနေအရှေ့၊ပုံမှန်လှိုင်းတံပိုး၏လပ်ြ၊ရှေ့နေတွင်စစ်ရေးကိစ္စရပ်များကိုအထူးသဖြင့်ဝယ်လိုအားအတွက်။ ဥပမာအားဖြင့်၊အများအပြားရးျပင္ဆင္ေသင်သိချင်မှာဘာကိစ္စခွင့် သို့မဟုတ်ကနေထုတ်ပယ်တပ္မေ။ တစ်ဦး၏အကြံပေးချက်စစ်ရေးအရှေ့နေထွက်တွက်ဆကူညီပေးပါမည်အခြေအနေအောက်မှာအရာရးျပင္ဆင္ေမှခံစားခွင့်ယူ။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေဟာ၊အထူးသဖြင့်အဘို့မသင့်တော်ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်များ၊ကျောင်းသားများနှင့်ဘွဲ့ရကျောင်းသားများ၏ပိုမိုမြင့်မားပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း;မိဘများနှင့်အတူသုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသားသမီး;ယဇ်ပုရောဟိတ်;ပုဂ္ဂိုလ်များနေထိုင်မှုအတွက်သိမ်းပိုက်နယ်မြေ;ပြုစုစောင့်ရှောက်တော်မူသောလူအသန်။ လေ့လာသင်ယူရန်အသေးစိတ်အကြောင်းကိစ္စများမှကင်းလွတ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်၊ကြည်းတပ်တွင်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက်၊သင်လေ့လာသင်ယူအကြံဉာဏ်။ တခါတရံရှိပါတယ်အခါရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏အကူအညီအစိုးရရှေ့နေလိုအပ်သည်ချက်ချင်း-ကျွန်မတို့အမြဲအဆင်သင့်နားထောင်ပေးပြီးအကြံဉာဏ်ပေး။ အများဆုံးမကြာခဏမေးခွန်းတွေ၊အရာလိုအပ်သောအကူအညီ၏အစိုးရရှေ့နေ၊အမရှိခြင်း၏အဆင့်အတန်းများပါဝင်၏သတ္မႈ။
ရှေ့နေန်ဆောင်မှုများနှုန်းထားများ အောက်မှာတစ်နေ့တာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှေ့နေအချိန်အတွင်းတစ်ခုပြက္ခဒိန်၊နေ့အခါရှေ့နေလုပ်ဆောင်ပြီးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်၏ကျောင်းအုပ်ကြီးများ၏အမှန်တကယ်အခိုက်သူ၏အလုပ်။ ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ဥပဒေရေးရာအကူအညီအတွက်ရှေ့နေနင်္ဂနွေနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များအဖြစ်ပေးဥပဒေရေးရာအကူအညီမှဆက်စပ်ထြက္ခြာသင်တစ်ဦးရှေ့နေများ၏အခြားဒေသလစာထက်မနည်းတဲ့ငွေပမာဏပါ။ အခါပေးဥပဒေရေးရာအကူအညီမှဆက်စပ်ထြက္ခြာရှေ့နေများ၏အနေအခြားတည်နေရာ၊ငွေပေးချေမှု၏ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ရပ်တည်ကုန်ကျစရိတ်ဤကိစ္စတွင်အတွက်ရကြလိမ့်မည်သဘောတူညီချက်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပါတီများ၏၊ဒါပေမယ့်မဖြစ်စေခြင်းငှါထက်လျော့နည်းကုန်ကျမှု၏အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်၏အကြံပေး။
ထုတ္မေျပြည်တွင်းကိစ္စများ အသုံးအများဆုံး၏ရှေ့နေတစ်ဦး-အရပ္ဖက္လူ။ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရှေ့နေများတရားရုံး၊၊ရှေ့နေ၊ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ က်ာင္းသားယူပြည်နယ်ဥပဒေ၊နိုင်လိမ့်မည်အနာဂတ်အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်အစိုးရနှင့်အများပြည်သူအဖွဲ့အစည်း။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာရိုကိုယ်တိုင်ကအဘို့အပြော:ဒါဟာပညာနာဂတ်မပ်ိဳ။ သတိပြုရွေးချယ်ခြင်းတစ်ဦးပရိုဖိုင်ကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးတစ်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါလုပ်ဖို့အနာဂတ်အတွက်အခြားဒေသများအတွက်။ မုချ၊တရားဝင်ပညာရေးအမျိုးမျိုးအတွက်တက္ကသိုလ်များကွဲပြားခြားနား။ ဒါကြောင့်၊မြင့်မားသောကျောင်းဘောပြင်ဆင်နေရှေ့နေနှင့်အတူတစ်ဘက်တွင်စီးပွားရေးနယ်ပယ်၊ဒါကြောင့်၎င်းတို့၏လေ့ကျင့်ရေးကပါဝင်ပတ်သက်ကြီးမားသောအတုံး၏စီးပွားရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာစည်းကမ်းများကို။ မှာ ၊အလေးပေးအဖြစ်အပေါ်နိုင်ငံတကာဥပဒေ၊ဒါကြောင့်ကျောင်းသားတွေလေ့လာနေသမိုင်း၊နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနိုင်ငံများ၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကဥပေဒ။
များသောအားဖြင့်အဖွဲ့ဝင်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ တချိန်တည်းမှာပင်အတွက်။ နှိပ်ပါအခန်းပေါင်းမှတဆင့်နှင့်အတူလာ။အခြားအဖွဲ့ဝင်များအတွက်ပုဂ္ဂလိကအဆက်အသွယ်။ စာစောင်ထပ်မံနှင့်အတူလာအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုအနည်းငယ်ခရီးစဉ်မှတဆင့်ချက်တင်အသုံးပြုမင်းချက်တင်အဖြစ်ဆက်သွယ်ရန်-ဒါလွယ်ကူသောအဘို့ချက်တင်၊အများအတွက်ရောနှင့်လိင်ဆက်အသွယ်သင်သည်သင်၏ဧရိယာ၌။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွစကားပြော၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အချိန်တိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူစကားပြော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ချက်တင်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်သောသူဖော်ရွေမှုကလူမျှဝေချင်သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူ။ သင်အသုံးပွုနိုငျသောဒေသဆိုင်ရာအဆောက်အဦ။ အပြင်မြို့ကြီးများဘာလင်၊မွှေးသို့မဟုတ်အမြူးနစ်၊စခန္းမ်ားအတြက္ သေးငယ်တဲ့ဒေသများသင်သည်သင်၏ဧရိယာ၌။ သင်မြင်သောအဖွဲ့ဝင်များအတွက်အခန်း။ သို့မဟုတ်၊သင်နှိပ်နိုင်သည်ပေါ်တိုက်ရိုက်"မဝင်ရ"နှင့်သင်၏အလယ်၌။ အပူစိတ်ကူးစိတ်ကမ်း၊သို့မဟုတ်သင်အလိုအတွေ့အကြုံအနေနဲ့နှိုးဆှအခန်းကဏ္ဍကို-ကစားအတွက်။ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ လှောအပူအခန်းပေါင်းအတွက်စာရင်းကိုအပေါ်လက်ဝဲဘက်သို့မဟုတ်ဖန်တီးသင်ကိုယ်တိုင်တစ်ဦး။ 'ပုဏ္ဏားစိတ်ကူးယဉ်'၊'မောင်သူ့ကိုရှာနေ'သို့မဟုတ်အဝတ်အချည်းအိမ်မှာ'ထိုအခန်းများ၌။ သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊သင်တန်း၏၊စကမ်နှင့်အတူ။အဖြစ်တစ်ဦးအခန်းဖန်ဆင်းရှင်၊သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်လမ်းဖြင့်၊သောအဖွဲ့ဝင်များကိုရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။သင်ကြိုက်လျှင်သင်၌အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၊သင်ဦးတည်အပူစကားပြောကြားလေးမျက်စိ။ သင်ရိုးရှင်းစွာပေါ်တွင်နှိပ်ပါ'ေရာ'လုပ်ပြီး၊သင်အဖြစ်ကောင်း၊မပင်သိချင်နေတာ။ သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊သင်သည်လည်းတစ်ဦးကမ်စကားဝိုင်းစတင်ဖို့။ ဤသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်မြန်မြန်ထက် သို့မဟုတ် ။ ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ပြုပါရန်နှင့်တိုက်ရိုက်အဘယ်သူ ။ ထုတ်ကြိုးစားအတွက်ဂျာမနီ၊ဂရိတ်လိင်ချက်တင်။.
ဥပဒေကြောင်းအရအပေါ်အကြံဥာဏ်အိမ္ရာကိစ္စများ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအိမ်ခြံမြေအေဂျင်စီ၊ဘယ်မှာဖောက်သည်ဂရုစိုက်၊မည်မဟုတ်ဆန့်ကျင်ိုင္၏အပြင်ဘက်တွင်အကြံပေးများအတွက်ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စရပ်များ။ လျှင်သင်ပြီးသားဖြစ်စေကြပြီအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်သဘောတူရှေ့တော်၌၊နှင့်ဤကိစ်စတှငျသင်ရှိသည်မည်သည့်ဥပဒေရေးရာပြဿနာများ၊ကျွမ်းကျင်သူသင်ကူညီဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ မဖယ်ထုတ်အခြေအနေကိုအခါသင်ရှိသည်ဖို့ဆူးအိမ်ခြံမြေရုံး။ ကိစ္စရပ်အမည်အားဖြင့်ရှုပ်ထွေးအသစ္တည္ထားသင့်ကုမ္ပဏီအတွက်အခြားတိုင်းပြည်သို့မဟုတ်အခြားမြို့။ ရှေ့နေများသည်အိမ်ခြံမြေ၊ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များအစိတ်အပိုင်းများမှာသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်နှင့်အတွေ့အကြုံနေစဉ်၊အဆိုင်သောသူတို့ထင်ရသိုးသိုး။
ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ် ချက်ချင်းအကူအညီ၏အမှုရှေ့နေ အများစုကတော့၊အရေးပေါ်ဥပဒေဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လိုအပ်သောအောက်ပါကိစ္စများ: မတော်တဆ; မောင်းရဲကို; ရှာဖွေမှု; ထာင္တြင္း; အဆာအတွက်ဥပဒေရေးရာစာရွက်စာတမ်းများ။ သင်တန်း၏၊တစ်စုံတစ်ယောက်ဖြေရှင်းဖို့နိုင်ခဲတဲ့အခြေအနေ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်၊ဒါပေမယ့်နှင့်အတူပါဝင်ဆောင်ရွက်၏တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှေ့နေပြဿနာမကြာခဏဆုံးဖြတ်ခဲ့၏မျက်နှာသာအတွက်အပ္သည္။ အချိန်မီအကြံပေးနှင့်ရှေ့နေများ၏အကူအညီကိုရောက်စေမည်မဟုတ်မေးခွန်းအားလွှတ်တော်သို့မဟုတ်ရုံးတင်စစ်ဆေး။ တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊အဆိုပါရှေ့နေစီမံခန့်ခွဲဖို့အခြေချပဋိပက္ခကိုငြိမ်းချမ်းစွာအလျှင်ပင်၊ထိုလိုင်းသို့သွားရဲသို့မဟုတ်အစိုးရရှေ့နေ။ ဥပဒေရေးရာအကူအညီကိုပတ်ပတ်လည်နာရီ အားဖြင့်အဘယ်ကိုဆိုလိုဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုကိုပတ်ပတ်လည်နာရီ. တယ်လီဖုန်းဆြးေႏြး-တခါတရံခေါ်ဆိုမှုမှရှေ့နေအကြောင်းလုံလောက်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ ဥပမာအားဖြင့်၊သည့်အခါအောင်အရေးလက်စွဲ။ အထူးကုချင်ကြပါဘူးအနီးရှိသင်ပြောပြရန်သင်မည်သို့အားဖြည့်သည့်အရာရှိ၊စက္ကူ; ထိုအထဲကစစ်ဆေးကီးဌာန၏အမှု၌စစ်ကြောရေး၊အသွားအလာမတော်တဆမှု၊ဒါမှမဟုတ်ရှာ; သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ရှေ့နေရဲ့ရုံးဇန်အတွက်:၏သင်တန်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေ့က။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် နှစ်ပါတီစနစ်။ ကတည်းကအားလုံးအသမ္မတဖြစ်စေခဲ့ကြသော်သို့မဟုတ်လစ်။ ဒါဟာအများစုရွေးချယ်မှု၏ဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်။ ကဒါသူတစ်ပါးအကြီးဆုံးအရေအမဲအတွက်သက်ဆိုင်ရာရြးေကာက္ပြဲခရိုင်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည်မရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ မဲအရေအတွက်ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကျင်းပ။ ဒီရွေးချယ်မှုကို၏ယောက်ျားျဖတ္ထားတဲ့ပါတီ။ ဤသည်အများအားဖြင့်အမုန်းသို့မဟုတ်အပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီ။ ပါတီအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အဆိုပါဆုရှင်တစ်ပြည်နယ်အတွက်ရရှိသွားတဲ့အားလုံး၏မဲကိုကျင်းပလျှင်ပင်သာနှင့်အတူ၊အမည်။ တစ်ဦးစုစုပေါင်းရှိပါတယ်ကျင်းပ(တန်းတူညီတူအဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ကိုအတွက်လွှတ်တော်အမတ်)။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်အရေးပါသည်အနိုင်ရဖို့အတွက်လူဦးရေအများဆုံးပြည်နယ်အတွက်။ ဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့်အတူအကြွင်းမဲ့အာဏာအများစု၏မဲအကျင်းပ(မဲ)။ တိုင်းဇာတိ-မွေးဖွား ။။ ပြည်သူသည်အနည်းဆုံးအသက်အနှစ်နှင့်အနည်းဆုံးနှစ်၌အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အကျယ်အဝန်း ရှိပါတယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ မည်သည့် ။။ ပြည်သူသည်အနည်းဆုံးအသက်အနှစ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်မှတ်ပုံတင်ထားရမယ်နိုင်ငံသားတိုင်း။ မလိုဟိုစာရင်းများမဲ။ နိုင်ငံသားပျက်ကွက်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ဥပမာအားဖြင့်၊ပြီးနောက်၊သူသည်အခွင့်မပေးရွေးချယ်။ အဘယ်သူမျှမ။ အဆိုပါမဲဆႏၵဆုံးဖြတ်မဲပေးခဲ့သူလူတကျူးလွန်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု။ ပြဋ္ဌာန်းရုံး၏အပေါ်ဖြစ်ပါသည်။ ဇန္နဝါေရြးေနှစ်တွင်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရရှိထားသူ၏အဖွင့်။ ဤသည်နေ့ရက်တွင်၊အခေါ်အဝေါ်ရုံး၏နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏။ ကိုဆန့်ကျင်ဘက်၊ပါတီဆုံးဖြတ်ရန်။ ဤစတင်အကြောင်းတနှစ်အ။ တမွန်အပေါ်ဒီနေ့(များသောအားဖြင့်မတ်လအတွက်အရြးေကာက္ပြဲနှစ်)ကျင်းပဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်အနည်းဆုံးရှစ်ပြည်ထောင်စုမှာတချိန်တည်း။ သို့သော်၊ဤသည်နေ့ရက်တွင်၊အဖြစ်ဆုရှင်များသက်ဆိုင်ရာပါတီများသောအားဖြင့်လည်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်ရုံး၏နိုင်ငံတော်သမ္မတ။ တစ်ဦးစုစုပေါင်းရှိပါတယ်ခြောက်မတူညီတဲ့နည်းလမ်းတွေအပေါ်မူတည်ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ် တူညီသော။ မျှမရှိဖောင်းစံအတွက်အမဲ။ ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီရှိ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများနှင့်ဥပဒေများကို။ များသောအားဖြင့်နိုင်ငံရေးသမားသည်အဆိုပါထိပ်တန်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းကြောင်းပေါ်လာမှာဆန့်ကျင်ဘက်အများစုအတွက်ပြည်ထောင်စုအဖြစ်ဆုရှင်။ အဆိုပါနိုင်ငံရေးပါတီ(လွတ်လပ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ)မှကျူးလွန်ဖို့ရွေးချယ်။ ဤမြှောက်သမ္မတအဖြစ်။ အဲတစ်ဦးရွေးချယ်မှု။ ၏အရေအတွက်ကိုကျင်းပမှလုိုက်၏အရေအတွက်အမတ်(ႏွပြည်နယ်)နှင့်အဖွဲ့ဝင်များကိုလွှတ်တော်(ဥပမာ၊ကျွန်၊ကယ်လီဖိုးနီးယား)။ ပထမတနင်္လာနေ့ဒုတိယပြီးနောက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလအကျင်းပ၌တွေ့ဆုံ၍မိမိတို့ပြည်ထောင်စုမဲကိုရွေးချယ်ပါ၊တရားဝင်အနောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတ။ အဆိုပါရလဒ်သည်။ ဇန္နဝါကြေညာမည်။ ဒီအစိတ်အပိုင်းအနိုင်ငံသားများအဘို့မိမိတို့ရြးေကာက္ပြဲမှတ်ပုံတင်ရန်ရန်လိုအပ်သည်၊နှင့်အချို့မိႈရှိအနိမ့်ဆုံးအနေလိုအပ်ချက်များ၊အများအပြားအမေရိကန်တွင်ပါဝင်ပါဘူး။
ဘယ္လိုအမျိုးအစားငါ့ဖုန်းနံပါတ်သို့ ? -ကအလုပ်မ။ ငါနားမလည်ကြဘူးဘယ်အစားျပရန္ကမေးသည်။ ငါကြိုးစားခဲ့အများအပြားပေါင်းစပ်ပြီးသူတို့ကိုအဘယ်သူမျှမအလုပ်လုပ်ခဲ့::မေးမြန်
ငါကအကြံပြုထောက်ခံကြပါဘူးသင်ပေးခြင်းအားအရေအချက်တင်ကစားတဲ့အဖြစ်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်စကားပြောခန်းကိုကျပန်းအတူလူ။ ငါသေချာမဖြစ်ကြောင်းကိုပေါ်ချက်တင်ကစားတဲ့ရဲ့။ ကားအဘယ်ကုဒ်ကိုအသံုးျပဳသူမ်ား? မစာရင္းကတော့ဘူး။ သင်ပြီးသားမှတ်ပုံတင်တော့မရမှတ်ပုံတင်ရန်။ သငျသညျဆိုပါကကၽြႏ္ုပ္၏မှတ်တမ်းအတွက်အသေးစိတ်အချက်အသွယ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရနိုင်ဖို့သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုသို့မဟုတ်အနိုင်ပေးအသေးစိတ်အတွက်။ သူတို့သုံးစွဲခွင့်ရှိပါတယ်သူကတစ်ဦးတည်းသင့်ရဲ့အကောင့်ကို ငါသေချာဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့လုပ်နိုင်ဖို့တစ်ခုခုမှာအနည်းဆုံးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ မင်္ဂလာပါ။ ငါအသစ်ဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်စကားပြောပ။ အတွက်ကျနော်တို့စကားပြောသူတို့ကကျွန်မကိုပြောပြတယ်အပါအဝင်တို၏။ ငါရေးဒါကြောင့်အပေါ်ကွာဟချက်ကို၊ထို့နောက်ငါကြည့်အတွက်ကျနော်တို့။ ငါ့ အကောင့်ကိုယာယီသော့ခတ်။ ဒါဟာမေးကိုရိုက်ထည့်ဖို့ယူနီကုဒ်နံပါတ်ရသောကျွန်တော်ထံသို့စေလွှတ်သင်မိုဘိုင်းနံပါတ်။ ဒါကြောင့်ငါထားသောကုတ်နံပါတ်ကပြောပါတယ်။ ကျွန်မကြိုးစားမှထငါ့အရေ၏အဆွေခင်ပွန်းသို့လျှပ်ချက်တင်ကေျပာေမဟုတ်ကြောင်းတရားဝင်မိုဘိုင်းလ်နံပါတ်အကူအညီ? ဟေး၊နံနက်ဝင်ရောက်ကျွန်မရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်လက်လှမ်းငြင်းသေးမယ့်ငါ့အရေအတွက်နှင့်ငါထမှန်ကန်စွာအပါအဝင်နိုင်ငံ။
ဥပဒေရှေ့နေ အဆိုပါရှေ့နေအထူးကုဖြစ်ပါသည်သည်ပညတ်တရား၏လယ်ပြင်၌။ သူသိဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများ၊သိတယ်၊သူတို့ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်နိုင်အခြေခံ။ အတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်ပညတ်တရား၏လယ်ပြင်၊ယူမည်သည့်တရားဝင်အနေအထားကနေရှေ့နေတစ်ဦးအစီရင်။ လိုအပ်သည်ရရှိရန်ဥပဒေဘွဲ့။ ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ဤနယ်ပယ်တွင်အသိပညာ၏ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီရှေးခေတ်ရောမမြို့။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပထမဦးဆုံးပေါ်သည်ထင်ရှားကိုယ်စားလှယ်များ၏ဥပဒေ-ကျည်။ သူတို့ကိုမှအငြင်းပွားမှုများနှင့်တရားကြီးလှုပ်ရှားမှု၏အယူအဆသွယ်ဝိုက်နှင့်လေးပခုံးပေါ်မှာ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်။ ထွန်းနှင့်အတူကျည်ဥပဒေရေးရာအသိပညာထွင်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံး၊အဆိုပါ၏တန်ခိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချပခုံးပေါ်မှာ၏ဧကရာဇ်၊ရှင်ဘုရင်နှင့်ဦးခေါင်း၏။ စက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်၊ထင်ရှားဖြစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ရှေ့နေ။ မွေးဖွားခဲ့ကြတရားရုံးနှင့်တရားစီရင်ရေးစနစ်။ အချိန်ကျော်အဆိုပါဥပေဒသည္အတွက်ဖွံ့ဖြိုးကျယ်ပြန့်။ အခြေခံဥပဒေများအတွက်ခဲ့ဘာသာ၊ကိုယ့်အမှားတွေကနေကျမ်းစာကိုပထမဦးဆုံးခဲ့ကြသည်။ သူတို့လုပ်ဆောင်သောလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အောက်ပါအတိုင်း။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဥပဒေအရသိရသည်နှေးကွေး၏နိဒါန်းဥပဒေအားဖြင့်တောင်ပေတရုပထမ။ ဒါကြောင့်သူသောသူကို၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ။ ထိုအခါတစ်ဦးဝင်း။ ကိုယ့်နောက်ကကျွန်တော်တို့တရားဝင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊အနီးခေတ်မီ။ အခုနောက်ပိုင်း၊ထိုဥပဒေသည်ကျယ်ပြန့်ဌာနခွဲများ၏အသိပညာနှင့်စွမ်းရည်များ။ ဒါဟာပါဝင်သည်တစ်ခုလုံးကိုတရားစီရင်ရေးစနစ်၊အသိပညာ၏ဥပဒေများကိုဥပဒေနှင့်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်နည်းလမ်းများကိုသူတို့ကိုထိန်းချုပ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြေးအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အစည်းအဆောက်အဦ။
ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အယူအဆ၏္ တာဝန်ရှိသူတဦးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်အတွက်အလေ့အကျင့်၏အယူအဆ"္"နှင့်"ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှု"စဉ်းစားနေကြတယ်နှင့်ညီမျှ။ သို့သော်၊အတွက်စာပေအမြင်ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြောင်း၊အောက်ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ထားရမည်အပြင်ဘက်ကနေဖြစ်ပေါ်သဘောတူညီနိုင်ရန်၊အခွင့်အအေဂျင်၊ဝန်ဆောင်မှု၊ယုံကြည်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအားဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊စီးပွားလျော(ကိုယ်စားလှယ်)၊အရာအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများအမှူးများ၊ကိုယ်စားလှယ်များ၊ကိုယ်စားလှယ်များ၊ကော်မရှင်၊ဂေါ၊စသည်တို့ကို။၊ သရုပ်ဆောင်ကောင်း၏ကိုယ်စားအခြားသူသို့မဟုတ်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကိုယ်အကျိုးစီးပွား၏။ ဒီအခြေခံပေါ်မှာအပြန်ဆိုန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှေ့နေ၊ဟုခေါ်တွင်စေသင့်သည်မဟုတ်ဥပဒေရေးရာ၊ဥပဒေနှင့်၊နှင့်အညီ၊ဟန်၊ဤထင်မြင်ချက်ကိုတင်ပြရန်၊အခါပေးရှင်းလင်းချက်၏အချို့အင်္ဂါများ၊ဥပဒေကြောင်းအရဇာတ်ကောင်
ရှေ့နေများ'အကြံဉာဏ် ယနေ့အချိန်တွင်၊ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ရှေ့နေ၊သင်ရနိုင်။ ဖြစ်လာတဲ့ဝမ်းနည်းဖွယ်အဖြစ်မှန်ကထိုကြေငြာ၏ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်နှင့်ဥပဒေကြောင်းအရကိုယ်စားပြုမွမ်းမံအပေါ်ထမ်းဘိုးဘေးအတွက်တံခါး။ ဤသင်တန်း၏၊သာရာရှိ၏ဂုဏ်သတင်းလံုးကိုဥပဒေကြောင်းအရအသိုင်းအဝိုင်း၊ဒါပေမယ့်လည်းသင်ဖို့ခြိမ်းခြောက်နေရင်အမှန်တကယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတို့အဖို့ သူကိုနိုင်ငံသားများတုံ့ပြန်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာတွေ။ သို့သော်ဤသည်သာပထမတစ်ချက်မှာပုံရတယ်သောမည်သည့်ရှေ့နေပြဿနာတွေမပါဘဲလုပ်ပေါ်တွင်သင်အကြံပေးနိုင်မည်သည့်ဥပဒေရေးရာမေးခွန်း။ မကြာခဏလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအရုံးသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများအပေါ်သူ၏ရှေ့နေနှင့်မေးမြန်းချက်ချင်း၊တယ်လီဖုန်းဖြင့်ပေးကြရန်၊ဥပဒေအကြံဉာဏ်။ ထိုမေးခွန်းတွေထုံးစံအတိုင်းမေးသည်မဟုတ်တစ်ဦးစံသောအဘို့အဘယ်သူမျှမစံအဖြေ။ ထို့ကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဘို့အကျွန်တော်တို့ကိုလာတိုင္ပင္ေဖောက်သည်များမကြာခဏပြောပြပြီးသူတို့ အနည်းငယ်အဥပဒေကိုကုမ္ပဏီ၊သူတို့ကငြင်းဆိုခဲ့ကြသည်ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်၊စွပ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကိုင်ရှေ့နေ။ တကယ်တော့၊အများအပြားရှိပါတယ်ရှေ့နေနေသောရိုးရိုးအတွန့်ဆုတ်နောက်လိုက်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဥပဒေကြောင်းအရတိုင်ပင်ဆွေးနွေး၏။ တစ်မှန်ကန်သောနှင့်အသုံးဝင်သောဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်အတွက်ဆက်စပ်အထူးသဖြင့်အမှုအပေါ်တပ်ဖွဲ့ကိုရှေ့နေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှာဖို့ဥပဒေသို့မဟုတ်ဆောင်းပါးတွင်အတွက်၊ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးရှာသည်စစ်မှန်သောဖြေရှင်းနည်းကိုဥပဒေကြောင်းအရ။ ထို့ကြောင့်ရွေးချယ်ရှေ့နေတစ်ဦးရရှိရန်အရည်အချင်းဥပဒေကြောင်းအရအပေါ်အကြံဥာဏ်၏ပြဿနာ၊ပိုကောင်းဖို့ရွေးချယ်သောသူတစ်စုံတစ်ဦးအတွက်အကျင့်ကိုကျင့်သင်သည်သင်၏အလိုရှိသောသည်ပညတ်တရား၏လယ်ပြင်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ဒီအမဆိုလိုပါဘူးသောအခြားရှေ့နေသို့မဟုတ်ရှေ့နေလိမ့်မည်မဟုတ်သင့်အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါ။ ကောင်းတစ်ခုရှေ့နေတို့ကအားလုံးကိုဒေသများရှိ၏။ သို့သော်စစ်မှန်သောအကူအညီနှင့်ပညာရှိဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်ရနိုင်တစ်စုံတစ်ဦးထံမှအတွေ့အကြုံရှိသူ၏စီးပွားရေးလုပ်နေအတွက်လိုချင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေနှင့်အသိအ ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ ဏာကိုဌား။ ဒါဟာထုတ်လုပ်သူ၏ဇယ္၊နှင့်ထိုသူအချို့နှစ်ပေါင်းများစွာခဲ့ပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်နာ္ဇယ္ဒြပ်စင်များ၊ပစ္စ၊အစာကျွေး၊ဘာသာျပန္ခ်က္၊ဟတ်ဦးခေါင်း၊ဖစ္သျပန်းကန်၊ကူရိုး၊အစာကျွေး၊၊စုပ်စက်၊ဒီဇယ်၊ ယူနစ်နှင့်တော့။ ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ် ။ ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့ကုန်ဌာနများအတွက်ပိုမိုအသေးစိတ်အချက်ကလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးအထူးပြုအဆောက်အဦးအပြင်ဖိုင်ဘာကြိုးထုတ်လုပ်သူတရုတ်အတွက်၊တစ်ဦးအပြည့်အဝအကွာအဝေးအတွင်းအပြင်ဖိုင်ဘာကေဘယ်လ်ကြိုး၊အဖြစ်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ ဤအဆောက်အဦးအပြင်ဖိုင်ဘာနန်းလည်းအသုံးပြုနိုင်ချိတ်ဆက်ဖို့အမိန့်အလယ်ဗဟို ဖို့။ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ။ ကျနော်တို့ပူဇော်ပြင်ဆင်ဒီဇိုင်း၏မြင်ကွင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်လိုက်လျောညီထွေ၏လျှောက်လွှာအထူးမီး။ ငါတို့သည်လည်းပူဇော်င့္ခ်င္းတည်ဆောက်ဖို့ပေါင်းစပ်အခြားအစိတ်အတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်ဖြည့်စွက်ဂျူးသို့မဟုတ်စပ်၏။ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို၊သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အစဉ်အဆက်တွင်စိတ်ဝင်စားခရီးသွားလာနှင့်ပြည်ပမှာနေထိုင်နေအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့၊ထို့နောက်မဟုတ်ကြဘူးမဆိုထပ်မံကြည့်ရှု။ ကျွန်တော်အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်တန်းကုမ္ပဏီအတွက်တရုတ်နိုင်ငံနှင့်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြနှင့်အတူနိုင်ငံခြားရေးကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့်ဆရာအစဉ်အဆက်ကတည်းက။ ကျွန်တော်တို့အတွက်တည်ရှိသည်လှဆိပ်ကမ်းမြို့တော်ဖြစ်ပါ၏၊အကြီးဆုံးတရုတ်နိုင်ငံအတွက်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံစစ်မှန်တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု၊နှင့်အတူအားလုံးအပိုဆောင်းဆုကြေးငွေခဲ့ကြကြောင်းမွေးရာအားလုံးအတွက်နိုင်ငံတကာဝန္ေဆာင္မႈ၊သို့ဖြစ်လျှင်ဤသင်တို့အဘို့အရာ။ ကျနော်တို့အလုပ္အားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံး၊ဒါကြောင့်မကြောက်ပါနဲ့မေးခွန်းတွေမေးမြန်းဖို့၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမည်။ -(ရှန်ဟိုင်း)အဌားတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်ထားသောမြို့တော်သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ။ ကျနော်တို့ကလူသန်းပေါင်းများစွာနှင့်၏ဧရိယာကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံ?။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရန်ထုတ္လုပ္သူနှင့်လိမ္နှဆီတံဆိပ်၊-လက်စွပ်၊-လက်စွပ်၊ရော်ဘာကပ္၊ နှင့်အမျိုးမျိုးရော်ဘာထုတ်ကုန်များအတွက်အသုံးပြုမာ္ေတာ္ကားရားမ်ား၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊အဏ္ဏဝါနှင့်အဏ္ဏယန္တရား၊စက်ပစ္စည်း၊စိုက်ပျိုးရေးယန္တရား၊အားကစားဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်း၊ကျနော်တို့လျှောက်ထား:နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်စာမေးပွဲ၊နှင့်ကျနော်တို့လက်မှတ်၊ကျနော်တို့ရရှိသောပြဲကိုလက်မှတ်နှင့်အကောင်အထည်ဖော် စီအစဉ်များ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်းဒေသ။ ကော်ဖီရောင်းရန်အတွက် သို့မဟုတ်ကော်ဖီရောင်းရန်အတွက် ၊ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာလစ်သူယေး။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တမ်း:အဘို့။ ယူရိုနှုန်း။ ယူရိုနှုန်း။ ယူရိုနှုန်း။ ဘွတ်ယူရိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်တဲ့အနိမ့်ဆုံး။ ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုအတွက်ယူရိုငွေအဖြစ်အပ်။ အပိုဆောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ဖို့အမြတ်အစွန်းကနေကော်ဖီအကြောင်းကိုအာရ်။ အနိမ့်ဝင်ငွေ၏ကိုယ့်တဦးတည်းယူရိုႏွကိုဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလွန်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူစုစုပေါင်းဝင်ငွေက-တစ်ယူရိုတစ်နေ့လျှင်၊
နှင့်အတူအမြတ်အစွန်းများ၏တဦးတည်းယူရိုငွေတစ်လလျှင်။ အဲဝန်ထမ်းများကို။ တစ်ဦးရှိပါတယ်နှိုင်းယှဉ်အတွက်အရက်။။။။။ ကျနော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီတွင်တည်ရှိသည် နှင့်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီအတွက်လစ်သူယေးဖြစ်န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောပည္ေထာင္စု၏ကုမ္ပဏီသည်။ ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုအဘို့အသင်၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားအမျိုးအစားများအသင်းဥရောပအပေါ်အခြေခံစီးပွားရေးလုပ်နေအတွက်ဥရောပနှင့်ဝယ်ယူရှယ်ယာများအတွက်ကုမ္ပဏီ။ အပေါ်မူတည်၏အရွယ်အစားနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှင့်သင်၏အကျိုးစီးပွား၊ကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုသင်တို့အဘို့။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်တစ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကုမ္ပဏီများအတွက်၊နှင့်ငါတို့သည်အဆင်သင့်ရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စီးပွားရေးဥရောပ(ဖ်)သည်အသစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီနှင့်အတူဥရောပသမဂ္ဂများအတွက်လိုင်စင်ကိုနိုင်ငံတကာကုန်တင်ျဖစ္သည္။ ဘဏ်မှအကောင့်ဖွင့်လှစ်အောင်၊တစ်တံဆိပ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ဖို့တရားဝင်။ စီးပွားခြင်းမရှိဘဲအကြွေးမှပြည်နယ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ဝတ္တရားများမှဘဏ်များ။ စျေးနှုန်း: ရန်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်အကြံဉာဏ် ကျနော်တို့ကူညီသင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လိုင်စင်။ ကျနော်တို့ကအာမခံချက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဝန်ဆောင်မှု၊အရာ၊အဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံ၏လယ်ပြင်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏လိုင်စင်။ ထိုသို့ပြု။ ပြင်ဆင်နေသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဥရောပ(ဖ်)အတွက်ရောင်းချခြင်းဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်အဆင်သင့်လုပ်စီးပွားခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်သင်အလွယ်တကူနဲ့လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်။ ကုမ္ပဏီကပြီးသားတစ်ဦးကလက်ရှိအကောင့်ကိုအတူဘဏ်မှလည်းအသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဘဏ်အကောင့်။ အထံတော်၌နှစ်ဦး၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကုမ္ပဏီများနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်သမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူ။ ကုမ္ပဏီများအပြည့်အဝထားစာရွက်စာတမ်းများကို၊တစ်ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်ပြီးတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ကုမ္ပဏီ။ အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းဘဏ္ဍာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်သည်၊ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြီးသားပါဝင်သည်အားလုံး၏ကုန်ကျစရိတ်ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်နှင့်စီးပွားရေးဖလှယ်အဘယျသို့။ စားသောက်ဆိုင်ဥရောပတိုက်တွင်ရောင်းရန်(ဖ်)တစ်မူထူးခြားသောစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွက်တစ်မူထူးခြားတဲ့စတိုင်။ တမြို့လုံးတွင်တည်ရှိသည်။ အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲအတွက်နေရာယူကြောင်းအဆိုပါစားသောက်ဆိုင်တဆိုင်အပတ်တိုင်းဆွဲဆောင်နှစ်ဦးစလုံး ႏိုင္ငံျခား။ စားသောက်ဆိုင် ဒါဟာရေပန်းစားသည်နှင့်အတူခရီးမွအမွားမ်ား၊အက်စ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများ။ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအဆက်မပြတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖွံ့ဖြိုးရေး၊မြှင့်တင်ရေးနှင့်ဆွဲဆောင်မှုများ၏အမှတ်တံဆိပ်၊နှင့်အရေအတွက်ဖောက်သည်များ၏ကြီးထွားလာသည်။ စားသောက်ဆိုင်တြထဲကငှားရန်းမှာအထူးအစျေးနှုန်း၊တိုးပွါးသော၎င်း၏အမြတ်အစွန်း။ အငွားစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးခဲ့ပါသည္။.
တွဲအွန်လိုင်းအတိုင်ပင်ခံ အကျိုးခံစားခွင့်များ၏ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်အွန်လိုင်းအဆိုပါဖုန်းနံပါတ်တွင်အလုံးအဆိုပြု၊နိုင်ငံသားများ၊ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အထောက်အပံ့သည်ထွက်သယ်ဆောင်ကိုသာအားဖြင့်အရည်အချင်းပြည့်ရှေ့နေများနှင့်ရှေ့နေ။ အဆိုပါအလုပ်၏အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်တင်းကျပ်မည်ဝှက်မှုနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များ၏အခြေအနေ၏အမှု။ အလှည့်အတိုင်းဖောက်သည်ပါဘူး၊စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းထပ်မံပြန့်ပွားမပါဘဲစကားပြောသူ၏ခွင့်ပြုချက်။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါကမ္ဘာလုံးနှင့်မေးလ်ရဲ့မှတ်ချက်။ ဤတဲ့အာကာသဖြစ်ပါသည်၊လစဉ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်နှင့်အတူအသီးအသီးအခြားနှင့်ကမ္ဘာ။ မ-လစဉ်ဖတ်ရှုနိုင်ပြီးအမျိုးအထူးပြောစရာမရှိပေမယ့်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သူတို့နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံ။ စာရင်းသွင်းရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။ လို့မရပါကရေးထားတဲ့စာတစ်စောင်မှအယ်ဒီတာ၊ယခုရှေ့ဆက်ဖို့စာဖတ်သူတွေလည်းထိတွေ့နှင့်အတူကမ္ဘာအပေါ် နှင့်တွစ်တာ။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါကမ္ဘာလုံးနှင့်မေးလ်ရဲ့မှတ်ချက်။ ဤတဲ့အာကာသဖြစ်ပါသည်၊လစဉ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်နှင့်အတူအသီးအသီးအခြားနှင့်ကမ္ဘာ။ မ-လစဉ်ဖတ်ရှုနိုင်ပြီးအမျိုးအထူးပြောစရာမရှိပေမယ့်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သူတို့နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံ။ စာရင်းသွင်းရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။ လို့မရပါကရေးထားတဲ့စာတစ်စောင်မှအယ်ဒီတာ၊ရှေ့က။ စာဖတ်သူတွေလည်းထိတွေ့နှင့်အတူကမ္ဘာအပေါ် နှင့်တွစ်တာ။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါကမ္ဘာလုံးနှင့်မေးလ်ရဲ့မှတ်ချက်။ ဤတဲ့အာကာသဖြစ်ပါသည်၊လစဉ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်နှင့်အတူအသီးအသီးအခြားနှင့်ကမ္ဘာ။ မွတ္ခ်က္မ်ားချိုးဖောက်သောကျွန်ုပ်တို့၏က်န္းမာေရးဖယ်ရှားပါလိမ့်မည်။ မှတ်ချက်များအဘယ်သူသည်ထပ်တလဲလဲ ချိုးဖောက်က်န္းမာေရးမည်ဆိုင်းငံ့စေဖို့သူတို့ကိုယာယီဆုံးရှုံးဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအတူထိတွေ့ဆက်ဆံ။
VideoChat for enhver smag. Gratis og uden registrering
ဗီဒီယိုချက်တင်၏အနှစ် လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုစကားပြောချိန်းတွေ့ အနက်သိမှရ ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ မရှိဘဲကြော်ငြာ ဗီဒီယိုအခမဲ့စကားပြောခန်း ၁၈ ချိန်းတွေ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း အြန္လိုင္း အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြော်ငြာ